ग्लोबल आइएमई बैंकले गरायो आफ्ना सम्पूर्ण कर्मचारीको कोरोना बीमा
काठमाडौं, ३२ साउन । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को बढ्दो कहरलाई मध्यनजर गर्दैै आफ्ना सम्पूर्ण...
काठमाडौं, ३२ साउन । सनराइज बैंक लिमिटेडले कोरोना कोषमा सहयोग गरेको छ ।
एनसेलद्वारा ‘अल्ट्रा वाइफाई सिम प्लस’ सेवा सुरु
काठमाडौं, ३२ साउन । एनसेल अजियाटा लिमिटेडले चौथो पुस्ताको मोबाइल सेवा फोरजी– लंग टर्म इभोलुसन (एलटिई) नेटवर्क विस्तार गरिएका देशका सबै स्थानमा...
काठमाडौं, २८ साउन । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले बुधबार काठमाडौं जिल्लाको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. १०, कपनमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । नयाँ शाखाको शुरुवातसँगै बैंकको शाखा कार्यालयहरुको संख्या २५९ पुगेको छ ।
कोरोना रोकथाम कोषमा नेपाल बैंक लिमिटेडद्वारा साढे तीन करोड सहयोग
काठमाडौं, २८ साउन । नेपाल बैंक लिमिटेडले कोरोना रोकथाम कोषमा साढे तीन करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ ।
एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड र ब्यालेन्स फण्डद्वारा लाभांश घोषणा
काडमाडौं, २८ साउन । एनआईसी एसिया बैंकद्वारा दुबै ग्रोथ फण्ड र ब्यालेन्स फण्ड लाभांश घोषणा गरेको छ ।
काठमाडौं, २७ साउन । आइएमई ग्रुपद्वारा प्रवद्र्घित आइएमई पे र जनरल इन्सोरेन्स कम्पनी लिमिटेडवीच सम्झौता भएको छ ।
काठमाडौं, २५ साउन । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले आइतबार दाङको घोराहीमा नयाँ एक्सटेन्सन काउण्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । मालपोत कार्यालय, घोराहीका प्रमुख विनोद कुमार पौडेलले बैंकको ४०औँ एक्सटेन्सन काउण्टरको उद्घाटन गरेका छन् ।
भारतले बढायो सुन धितोमा कर्जाको सीमा
काठमाडौं, २३ साउन । कोभिड–१९ का कारण प्रभावित साना तथा मझौला उद्योगका लागि भारतीय रिजर्भ बैंकले थप सुविधा दिने भएको छ ।
काठमाडौं, १ साउन । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा साउन १ गतेबाट कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सन्तोष प्रसाईलाई दिइएको छ ।
काठमाडौं, ३१ असार । सेवाग्राहीहरुको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै आइएमई मार्फत सोझै बैंक खाता तथा मोबाइल वालेटमा पैसा पठाउँदा तुरुन्तै जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा प्रदेश १ लाई कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आर्थिक सहयोग
विराटनगर, २८ असार । ग्लोबल आइएमई बैंकले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेश नं. १ सरकारलाई १० लाख रुपैंया सहयोग गरेको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा कर्णाली प्रदेशलाई कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आर्थिक सहयोग
काठमाडौं, २६ असार । ग्लोबल आइएमई बैंकले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारलाई १० लाख रुपैंया सहयोग गरेको छ ।
काठमाडौं, २५ असार । ग्लोबल आइएमई बैंकले कोरोना रोेकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारलाई रु. १० लाख सहयोग गरेको छ ।
प्रदेश २ राहत कोषमा ग्लोबल आइएमइ बैंकको दस लाख सहयोग
जनकपुरधाम, २४ असार । कोरोना महामारी नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारका लागि प्रदेश २ सरकारले स्थापना गरेको राहत कोषमा ग्लोबल आइएमई बैंकले दस लाख सहयोग गरेको छ ।
विश्वका १० सर्वाधिक धनी क्लबमा प्रवेश गरे मुकेश अम्बानी
काठमाडौं, ८ असार । भारतीय धनाढ्य मुकेश अम्बानी विश्वका १० ठूला अर्बपतिको क्लबमा प्रवेश गरेका छन् ।
बागलुङ, ४ असार । नेपालको संविधान २०७२ को भावना अनुसार सहकारी क्षेत्रको भूमिका देखिने गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउन ७ सय ५३ वटै पालिकाहरुको ध्यानाकर्षण गराइने भएको छ ।
काठमाडौं, १ असार । ओमानबाट १६६ यात्रु बोकेर सलाम एयरको जाहाज काठमाडौँ विमानस्थलमा अवतरण गरेको छ । विदेशमा बस्ने कोभिड–१९ बाट प्रभावित नेपालीहरुलाई सम्बन्धित देश तथा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड
बागलुङ, २९ जेठ । राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सि.ए. बद्रीकुमार गरागाई पुनः नियुक्ती हुने भएका छन् । बैंक सञ्चालक समितिको बुधवार सम्पन्न वैठकले गुरागाईलाई आगामी ४ वर्षका लागि बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।
बुटवल, २२ जेठ । ग्लोबल आइएमई बैंकले कोरोना भाइरस (कोभिड –१९) विरुद्धको अभियानमा प्रदेश नं. ५ सरकारलाई नगद रु. २५ लाख सहयोग गरेको छ ।
काठमाडौं, १८ जेठ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले विभिन्न जिल्लामा रहेर पत्रकारिता गर्ने फोटो पत्रकारहरुलाई प्रेस ज्याकेट उपलब्ध गराएको छ ।